Ingane waya esikoleni, udinga emsebenzini lapho kuzoba umsebenzi wesikole. Futhi umsebenzi obalulekile sokumisa ukusebenza umfundi ndawo ukukhethwa efanele kwesitulo wamathambo zezingane, njengoba kuthinta isimo ingane. Isihlalo kumele kube okungaphezu nje hhayi emgogodleni esikahle futhi zikhululekile, kodwa kuyasizuzisa ingane eqinile.
Kubalulekile kuzuzwe umphumela enjalo emuva izinto ezifunwa ingane akukona ukhathele ehlezi isikhathi eside kangaka kodwa kwaba njalo sisendaweni ekahle phambili. esihlalweni kuphela ekhethekile enikeza izici wamathambo of umzimba wengane ungakwazi ukubhekana naso.
Izici esihlalweni wamathambo zezingane
Ochwepheshe abaningi bangase baphikise ngokuthi eside uhleli leyo ngane uSihlalo ezejwayelekile emgogodleni iqala ngekhevu futhi kamuva ingaqala izifo ezifana ukugobeka komhlandla, ukhwaliti ubuhlungu emuva, okuholela imiphumela engemihle wonke umzimba.
Ezinganeni esikoleni kusofa wamathambo yakhelwe ngendlela yokuthi ngokulinganayo ihambisa umthwalo phezu emgogodleni lapho sihlezi khona, ihlinzeka isikhundla zemvelo, kube kugcinwe ukugeleza kwegazi esebenzayo kuzo zonke izitho zomzimba kunomthelela asebenzayo yabo nekusebenta kahle.
Akanalo yokubeka. It yokubeka neqhaza yokuthi ingane iqala slouch, ukujwayelana ukuncika. Kwalandela isikhathi engekho ebangela ukuthi ingane sesimweni emile futhi elungile, eqinisa imisipha emuva.
I backrest kuyinto adjustable. impilo Kids esihlalweni Wezingane has adjustable kuzo zombili nokuphakama nokujula kwesihlalo. Lokhu kwenzeka njengoba ingane ikhula, kungashiwo esihlalweni "ikhula" nengane.
Isihlalo has a nesiqondiso awugcini nje ukulungisa esihlalweni ekukhulisweni kwengane, kodwa futhi ukuze ukuphakama etafuleni lapho ingane uzokwenza.
Secure ukulungiswa - umntwana iminwe abakwazi singene indlela.
I design yalesi situlo ngokuphelele ephephile ingane. Ngokwesibonelo, amathambo Duo Kids ingane esihlalweni esakhiwe ngezinto okuyizinto imvelo ngaphandle evele tapered nama-engeli.
Ngo izihlalo wamathambo abe nezilungiselelo siqu, okukuvumela ukuba ulungise ngokuhambisana wengane esakhula. Footrest kungase kushintshwe ukuphakama, okuvumela nosihlalo ukuze uvumelane ngisho ngaphansi abavamile omdala edeskini. Izinketho ukuthi zikhona ngendaba ifenisha zezingane, ungavumeli ukuba ukuyisebenzisela ezinye izinjongo. Akukho Ukujikeleza Axial, esiza ingane gxila lo msebenzi futhi cha thikazisa lo mdlalo. Kusukela esemncane wenza ukulawula ukuma, okuyinto ebaluleke ngoba izingane ukuchitha isikhathi esiningi kule amakilasi futhi kuyi-computer.
Ngaphezu kwalokho, zezingane esihlalweni wamathambo Duorest Kids esetshenziselwa nje ingane ikhula. Umklamo isihloko ifenisha zezingane okuhlala isikhathi eside kakhulu, ephephile, kulula ulungise, ngezinto eco-friendly.
Naphezu izincomo eziningi, abanye abazali ungayiboni isidingo ukuthenga izihlalo wamathambo zezingane, kuyize. Phela, lo mklamo ongaxazulula izinkinga eziningi zempilo esikhathini esizayo.
esihlalweni Wezingane wamathambo kudala ukuma okuhle ezinganeni kusukela ngineminyaka emihlanu ubudala.
zokuvimbela Ikhishwa of ukugobeka komhlandla futhi esiwohlozayo disc isifo esikhathini esizayo.
Ithuba ukubeka ingane ngasiphi itafula ezikufundile.
Kusofa nge Duorest uhlelo
Cabanga wamathambo Duorest esihlalweni zezingane ukuklanywa nokusebenza. Lolu hlelo ikuvumela ukuba ukuphinda zonke ukunyakaza ingane ohlezi esihlalweni. Lona elula, njengoba ingane ekilasini njalo azizwa ukwesekwa emuva ngokuphelele kunoma iyiphi indawo.
Umsebenzi oyinhloko izihlalo lezi zezingane wamathambo - kokunakekela impilo yengane. Zenziwa kusukela esezingeni materials, ngemuva enezinto eziningi nezihlinzeko zomthethonqubo. Isici esibalulekile wukuthi kwesitulo asishintshi neze futhi ine-eksisi ezinhlanu izisekelo ne amasondo ezilotshwe ngaphansi isisindo ingane.
I backrest inedizayini ekhethekile, lapho ababili kuyahamba futhi ezimele nomunye, okuyinto eyenza yomgogodla lumbar ukuba uhlobo corset. izifundo eziningi kule situlo kuzovumela emuva ukuba endaweni ukhululekile ukuthi kuyasiza yini uzizwe ukhathele kusukela ehlezi isikhathi eside kangaka. Ngaphezu kwalokho, umklamo siphinde sihlinzekele nezinhlelo ezihlanganisa ukushona ukukhanya emuva obubanzi ingane emhlane.
Thenga esihlalweni zezingane wamathambo ngoba ingane waya esikoleni, kubalulekile, naphezu izindleko zawo, ngoba kuthinta inhlalakahle kanye impilo yengane yakho.